Cilmi-baarista Apple waxay daah-furtay daraasado cusub oo ku saabsan Maqalka, Wadnaha, Firfircoonida, iyo Caafimaadka Haweenka | Wararka IPhone
Xusuus-qorkii bishii Sebtember, Apple wuxuu ku dhawaaqay barnaamij cusub oo loo yaqaan Baaritaanka Apple. Waa barnaamij cilmi baaris furan kaqeybgalayaasha leh Apple Watch iyo iPhone. Waxay soo bandhigeysaa sameynta daraasad mowduucyo muhiim u ah caafimaadka wadnaha, dhaqdhaqaaqa, maqalka iyo caafimaadka dumarka.
Laga bilaabo Khamiistaan, codsigan waxaa horey looga bilaabay Mareykanka si dadka isticmaala ee doonaya inay isdiiwaangaliyaan ay ubixiyaan xogtooda caafimaad si qarsoodi ah si ay uga qeyb qaataan daraasaddan. Shirkaddu waxay hubineysaa in kaqeybgalayaashu ay gacan ka geysan karaan helitaanka daahfurnaanta caafimaadka, iyo inay gacan ka geystaan ​​abuuritaanka jiilka xiga ee qalabka daryeelka caafimaadka.
1 Barashada maqalka
2 Daraasada wadnaha iyo waxqabadka
3 Daraasada Caafimaadka Haweenka
4 Barnaamijka Apple Research
Daraasada Maqalka ee Apple waxay aruurin doontaa xogta ku saabsan isticmaalka headphone-ka iyo soo-gaadhista dhawaqa goobta iyada oo loo marayo iPhone iyo barnaamijka cusub ee Sawaxanka ee Apple Watch. Jaamacadda Michigan waxay u adeegsan doontaa xogta si ay u go'aamiso sida muddada dheer ee soo-gaadhista dhawaqu u saamayn karto heerarka buufiska iyo caafimaadka wadnaha. Kaqeybgalayaasha waxaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeyn doonaa kooxaha daraasada dhexdeeda ah, si ay u qiimeeyaan in ka helida ogaysiisyada barnaamijka caafimaadka markii la ogaado dhawaqa weyn la ogaan karo inay ku dhiirigelin karto dadka isticmaala inay wax ka beddelaan dabeecadaha dhageysiga
Daraasada wadnaha iyo waxqabadka
Daraasada wadnaha iyo waxqabadka, waa qayb ka mid ah dadaal ballaaran oo lagu dhiirrigelinayo waxqabadka caafimaadka leh iyo hagaajinta nidaamka wadnaha. Apple waxay iskaashi la leedahay Brighan iyo Isbitaalka Haweenka iyo Ururka Wadnaha ee Mareykanka si ay u baaraan sida dhaqdhaqaaqa daciifka ah, oo ay la socdaan faahfaahinta ku saabsan garaaca wadnaha iyo garaaca, loo isticmaali karo inay yihiin astaamaha digniinta hore ee cilladda wadnaha.
Daraasada Caafimaadka Haweenka
Haweenka Apple waxay ujeedadeedu tahay inay horumariyaan fahamka wareegyada caadada iyo xiriirka ay la leeyihiin xaalado caafimaad oo kala duwan, oo ay ku jiraan polycystic ovary syndrome, dhalmo la'aan, lafo xanuun, iyo kala-guurka caadada. Daraasadda waxaa lagu fuliyay iyada oo lala kaashanayo TH Harvard School of Public Health, TH Chan, iyo NIH Machadka Qaranka ee Sayniska Caafimaadka Deegaanka.
Daraasadu waxay adeegsan doontaa iPhone-ka oo lagu lammaaneeyey Apple Watch si loo ururiyo macluumaadka la socoshada wareegga, waxayna sameyn doontaa baaritaanno bille ah si loo fahmo kaqeybgale kasta khibradiisa caadada. Xogta ayaa la isku dari doonaa si loo falanqeeyo saameynta dabeecadaha qaarkood iyo caadooyinka ay u leeyihiin arrimo badan oo ku saabsan arrimaha caafimaadka taranka.
Barnaamijka Apple Research
Dhacdadii bishii Sebtembar, Apple waxay ku soo bandhigtay saddex mashruuc oo hadafkoodu yahay hagaajinta caafimaadka dadka. Daraasaduhu waxay isticmaali doonaan xogta ay bixiso Apple Watch, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah muuqaalada ku cusbaa daawashada 6.
Aasaaska barnaamijka Cilmi baarista waxaa la sameeyay intii lagu jiray iyo kadib Daraasadii Wadnaha ee Apple. Jaamacadda Stanford ayaa toddobaadkan daabacday shaqo ku saleysan xogta laga helay daraasaddan. Apple waxay mashruucan bilowday dabayaaqadii 2017, iyadoo barnaamijka markii dambe loogu magac daray American Heart Journal, oo cinwaan looga dhigay "Arrhythmia-kii ugu weynaa ee abid soo mara." Baadhitaanku wuxuu dhammaaday 2018, xogta lagu helay daraasaddaas waxaa loo isticmaalay in lagu helo oggolaanshaha FDA ee korantada oo muujineysa taxanaha Apple Watch ee 4.
Muddo sanado ah, Apple waxay dadaal badan ku bixisay inay baarto sida qalabkiisu nooga caawin karo inaan horumarino caafimaadkeenna, waana in la qiimeeyaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple Research waxay bilawday daraasado cusub oo ku saabsan maqalka, wadnaha, dhaqdhaqaaqa iyo caafimaadka dumarka